Ahlusuna oo dalbatay in Wasiir ku xigeen la siiyo hadii kalana... - Caasimada Online
Home Warar Ahlusuna oo dalbatay in Wasiir ku xigeen la siiyo hadii kalana…
Ahlusuna oo dalbatay in Wasiir ku xigeen la siiyo hadii kalana…
Ururka Ahlusuna ee ayaa ka dalbaday Xukuumada Soomaaliya in laga siiyo jagooyin ah xilka Wasiir ku xigeen waxaana ay dhanka kale ka hadleen codka Baarlamanka ay ku ansixiyeen Golaha Wasiirada.
Gudoomiyaha labada Gole ee Ahlusuna Waljameeca Sheekh Ibraahim Xasan Guraaye oo lahadlay warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay soo dhawaynayaan Golaha wasiirada ee maalintii shalay la ansixiyay kana sugayaan howl adag oo u baahan in gunta dhiisha laysaga dhigo.
Marka laga yimaado soo dhawaynta Xukuumada Ra’iisul Wasaare Shirdoon waxaa jira baaq uu u dirayo xukuumada qaban qaabada ku jirta.
Waxaa uu Masuulkaan codsaday in Ahlusuna laga siiyo Golaha Wasiirada Wasiiro ku xigeen maadama ay ku heshiyeen taas xukuumadii tan ka horaysa waana balan aan la galnay ayuu yiro dowladihii hore.
Dhanica kale waxaa uu sheegay Sheekh Ibraahim Xasan Guraaye in dhawaan kulan wayn ay ku yeelan doonaan masuuliyiinta Ahlusuna oo dhan gobolada dhexe ee dalka kaas oo uu sheegay in isku shaan dheyn lagu samayn doono Xilalka Xubnaha Ahlusuna.